KII 127aad Khadka tooska ah ee internetka ee internetka ee CANTON FAIR
HEBEI CHENLI RIGGING GROUP CO., LTD. Boot No. 15.2G30-31 & 8.0V12 Kusoo dhawow inaad soo booqato qolkeenna 10 maalmood * 24 Saacadood khadka tooska ah * 12 Saacadaha Live Streaming Taariikhda: Juun 15-24-24th
Hambalyo shirkadda Hebei Chenli Group acquries Jiangsu Oumar Company.
waxaa maamula 20-04-09
Si diiran u dabaaldeg Hebei Chenli Group iyo Jiangsu Oumar Qalabka mideysan ee isku dhafka ah, Chenli waa Shiinaha markii ugu horeysay soo saare silsilad-sameeye, Jiangsu Oumar sida silsiladaha u xayirnaa hogaamiyaha warshadaha, waxaan aaminsanahay in labada is dhameystiraan midba midka kale, wax soo saarka iyada oo aan loo eegin tayada farsamada ama qiimaha w. ...
Dhismaha Xarunta Hebei Chenli
Si aan ula shaqeyno horumarka caalamiga ah ee Chenli, waxaan codsaneynaa shan iyo toban kun oo mitir murabac dhul leh si aan u dhisno xarun kooxeed cusub. kani wuxuu u noqon doonaa waqti taariikhi ah kooxda weyn ee Chenli ， awooda waxsoosaarka ayaa sedex jeer kor u kici doonta,
Lever hoist lever hoist silsilad dheeri ah
waxaa maamula 20-02-24
lever hoist lever silsiladda silsiladda aqoonta badan ee silsiladda sharaxaadda silsiladda korantada silsiladda korantada, oo sidoo kale loo yaqaanno dhaqdhaqaaq, waa aalad gacan qaadis heer heer shaqo culus ah. silsiladda lever xidhaa cusub, hufan, amaan, waarta oo leh wiish, jiidis, xiisad sedex howleed, dhismaha oo dhan ...
Xarkaha xadhkaha korantada xargaha korantada
Kormeerka joogtada ah ee xadhkaha xadhkaha korontada 1.1 hubi xadhkaha xadhkaha korantada fiilada korantada fiilada haysaa haddii ay jiraan fiiro-gooye york cusub, burburin, xadhkaha, xadhkaha xadhkaha jebi kara ama fiilada. hubi in xariggu uu galo godka iyo xargaha xargaha xargaha fiilogaarka xudunta. 1.2 hubinta xarigga jiidaha korantada dillaac ...